Baqattoota Galaana Yaman Keessatti Darbaman Keessaa Kanneen Lubbuun Hafan Attam ta’an? |
August 15, 2017 in Oromia
WASHINGTON, DC (VOA Afaan Oromoo) — Hagayya sagalii fi kudhan bara 2017 doniin lama baqattoota fe’anii Somaaliyaa irraa eega ba’anii booda handaara galaana Yamantti eega dhiyaatanii booda imalatoota galaanatti naqanii deebi’uu isaanii jaarmayaan godaantoota addunyaa ykn IOM gabaasee ture.
Irra heddduun godaantoota kanaa lammiwwan Itiyoophiyaa kaan immoo kan Somaaliyaa ta’uun ibsamee jira. Oromoota balaa kana irraa hafan haasofsiifnee Jimaata Hagayya 11 bara 2017 dhiyeessuun keenya ni yaadatama.
Kanneen balaa kana irraa hafan wal’ansa fayyaa kan hatattamaa jaarmayaa godaantoota kan addunyaa irraa eega argatanii booda imaltuu itti fufanii jiru. Kanneen humni isaanii dadhabee miidhama qaban immoo mooraa baqataa UNHCR naannoo sana jiru seenan. Oduu haaraan dhaga’ame immoo Kamisuuma sana doniin biraa Bosaasoo irraa baqattoota feete nagaan Yamantti galuun ishee ti.
WAASHINGITAN, DIISII (VOA Afaan Oromoo) — Bara 2015 Saa’udii keessa jiraachuuf ehama hin qabu jedhamee biyyatti deebifame. Yeroo filannootti dhiyoo ture yeroon isaa. Bakka dhaloota isaa godinaa Harargee Bahaa dhaqee haadha warraa fuudhe. Garuu, yeroo gabaabaa keessatti hidhamee ragaan dhabamnaan gadhiifame. San booda haatii warraa barattuu waan turteef achuumatti dhiisee gara Finfinneetti ol ba’e. Achuuma Finfinnee keessaa qabamee hidhame. “Dararaa guddaan hidhaa keessatti erga na irratti rawwatamee fi baatii afur eegan hidhamee booda ragaan hakimaa haala gaarii irra hin jiru waan jedheef akkasumas ragaan tokko iyyuu waan dhibeef na gadhiisan” jedha.
Haadha warraa isaa arguuf gara godiinaa Hararagee Bahaatti hin deebiine. Dubbiin waa’ee lubbuu ofii oolchuu fi maatiin biraas hariiroo isa waliin qabaniin akka hin hidhamne gochuu waan ta’eef, kana yaadee jireenya baqaaf biyya isaa gadhisee godaane. Erga biyyaa ba’e yeroo murta’aaf sagalee haadha warraa isaa ka dhaga’aa ture ta’uu dubbata. Biyya keessattis haadha warraa isaa waan dorsiisaniif bilbiluufiinan sodaadhan ture jedhe.”Yeroo dhumaaf” baatii tokko dura Wucaalee irraa sagalee haadha warraa isaa dhaga’uu dubbata.
Doniiwwan lama kan torban darbee Bosaasoo irraa ka’anii torban dabre baqattoota galaanatti naqanii deebi’an sana keessa turte, haati warraa isaa. Achuma keessatti galaanaan nyaatamtee du’an boqotte. Yaa carraa dhala namaa! Abbaan warraa amma iyyuu maatii isaa ykn maatii haadha warraa isaa biyya keessa jiraniif bilbilee gadda isaa ibsuuf wal jajjabeesuuf rakkoo irran busa jedhe akka sodaate dubbata.
Dararaa mana hidhaa keessatti dhaqqaba jedhame kana kan ilaaleen waajiira dhimmootii Komumikeeshinii kan mootummaa Federaala Itiyoophiyaaf ministeera kan ta’an Dr. Nagarii Leencoo gaafatamanii namoonni hidhaa keessaa ba’an yeroo dubbatan sabaa himan dhaga’amaa ture jedhanii dhugumaan kannen kana gaggeessan jiraachuun ragaan mirkanoofnaan tarkaanfiin seeraa ni fudhatama jedhan. Kunis ejjennaa mootummaa isaanii ta’u ibsan.
Bulchiinsa naannoo Oromiyaa fi kan Amaaraa keessatti Komishinni mirga dhala namaa kan mootummaa Federaalaa qorannaa gaggeessaa akka jiru kunis paarlaamaan boqonnaa irraa yeroo deebi’uu kan dhiyaatu ta’u hubachisan. Wanni namoonni hidhaa keessaa ba’an dubbatan kun achi keessa jira yoo ta’e ilaalamuuf jira jedhan.
Gabaasaa guutuu dhaggeefadhaa